Dagaalka Sokeeye ee Itoobiya: Siday Itoobiya ku gaartay halkaan iyo doorka Qowmiyadaha kala duwan? - Diblomaasi
Asalka dagaalka sokeeye ee hadda socda waxa uu dib ugu noqonayaa dagaalkii sokeeye ee 1991kii. Isbahaysiga EPRDF oo ay ku midaysanayeen afar xisbi balse ay u badnayeen kooxda TPLF, ayaa awooddii dawladnimo isku darsaday ka dib markii ay xukunka ka tuureen Dergiga, oo ahaa taliskii milatariga ahaa ee xukumayay Itoobiya 1974 ilaa 1991kii.
Afarta xisbi waxay kala ahaayeen TPLF, Amhara Democratic Party, Oromo Democratic Party, iyo the Southern Ethiopian People’s Democratic Movement (SEPDM).
Isbahaysiga TPLF ee talada dalka gacanta ku haya muddo ku dhow 30 sano ah waxay ku xukumayeen dalka cadaadis aan ka fiirsi lahayn iyo tacadiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka, oo ay weheliso xariga madaxda mucaaradka iyo suxufiyiinta.
Taliskii EPRDF wuxuu xaqiray qoomiyada Oromada iyo Amxaarada. Ugu dambayntii, xubnaha fulinta ee labada qoomiyadood ayaa go’doomiyay TPLF waxayna u codeeyeen inay ka baxaan isbahaysiga talada haya bishii Abriil 2018.
Beddelkeeda, waxay u codeeyeen in Abiy Axmed (oo Oromo ah) uu noqdo ra’iisul wasaaraha Itoobiya. Axmed wuxuu isku daray dhammaan xisbiyadii EPRDF, marka laga reebo TPLF iyo xisbiyo kale oo mucaarad ah, si uu u abuuro xisbiga Barwaaqo oo hadda ka taliya Itoobiya.
TPLF ayaa diiday inay ku biirto xisbigan cusub. Waxay ku dhawaaqday Abiy Axmed inuu yahay maamul aan sharci ahayn, waxayna u guurtay Tigray, oo ay weli maamusho maanta.
RW Abiy Axmed, ayaan wax wakhti ah iska luminin, iyadoo saraakiishii TPLF ee xilalka muhiimka ah ka hayay dowladda dhexe uu meesha ka saaray, kadibna wuxuu dib u saxay awooddii Tigreega ee ciidamada Itoobiya.
Dadaalka uu ugu jiray soo celinta xiriirka Eritrea, oo ay Itoobiya 20 sano ka dhaxeysay colaad xuduudeed, oo uu sidoo kale ku muteystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize 2019, ayaa sii fogeysay kooxda TPLF. Laakiin kooxda TPLF ma aysan fadhiisan mana aamusin, markii ay weerar ku qaaday Taliska Woqooyi ee Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya (ENDF) 3dii Noofambar 2020, taas oo loo arko taariikhda rasmiga ah ee uu bilaabmay dagaalka sokeeye ee hadda socda.
Maxaa dhacaya Hadda?
Ciidanka RW Abiy Axmed ayaa qaaday weerar aargoosi ah oo ka dhan ah kooxda TPLF, waxayna ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah gobolka Tigray, waxayna dhiseen dowlad ku meel gaar ah oo dooran doonta hogaamiyayaal cusub oo Tigray ah.
Isla bishaas, Noofambar 2020, ciidamada Abiy Axmed waxay qabsadeen Mekelle, oo ah caasimadda Tigray, iyadoo ra’iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay in tallaabada xigta ay noqon doonto in la ciqaabo “dambiilayaasha TPLF oo la horgeeyo maxkamad sharciga ah”, ayuu yiri – The Guardian ayaa qortay.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markaas, warbixino naxdin leh oo ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kufsiga ayaa la soo bandhigayay.
Dilalka baahsan ayaa aad ugu badan guud ahaan Tigrayga, cilmi-baarayaashu waxay ku guulaysteen inay ururiyaan liiska ugu yaraan 1,900 oo qof oo la aqoonsaday kuwaas oo ay ciidamada Itoobiya ku dileen Tigray, sida lagu sheegay warbixin gaar ah oo lagu daabacay The Guardian.
Kadib burburkii magaalada Mekelle iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigreega, ciidamada daacada u ah kooxda TPLF ayaa dib isu habayn ku sameeyay iyaga oo ah ciidanka difaaca Tigray-ga, waxayna u ruqaansadeen dhulka miyiga ah iyo buuraha Tigreega, halkaas oo ay ka soo qaadeen weeraro jabhadayn ah.
Bishii Juun 2021, TPLF waxay dib u qabsatay Mekelle waxayna hawlaheeda qabsashada ku balaarisay magaalooyin kale oo Tigray-ga ah iyadoo saraakiisha dawladda ku meel gaarka ah ay carareen.
Si kastaba ha ahaatee, go’doominta dhabta ah ee gobolka Tigray ee xukuumadda RW Abiy Axmed ayaa jirtay in ka badan saddex bilood. Tani waxaa ka mid ah in la xaddido in cuntada iyo dawada loo maro gobolka, iyo in la gooyo adeegyadii isgaarsiinta iyo bangiyada, arrimahaas oo is biirsaday ayaa abuuray xaalad masiibo ah oo macluul iyadoo 4,00,000 oo qof ay halis sare ugu jiraan macaluul, ayay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Qaxooti badan ayaa u qaxay Suudaan, in ka badan boqolkiiba 70 dadka Tigrayga waxay u baahan yihiin gargaar cunto, sida ay sheegtay BBC-da.
Waa maxay sababta Ereteriya ay ula safan tahay Abiy Axmed, maxaase keenay inay soo gasho dagaalka?
Khudbad mahadnaq ah oo uu u jeediyay baarlamaanka Itoobiya wax yar uun ka dib markii uu dagaalladii sokeeye ee billowday bishii Noofambar 2020, Abiy Axmed wuxuu ku andacooday in Ereteriya ay quudinaysay, caawisay, oo ay hubaysay ciidamadii Itoobiya oo dib u gurtay xilligii ay kooxda TPLF soo qaadaysay duullaankii asalka ahaa, taas oo u sahashay inay la dagaallamaan kooxda TPLF.
Inkasta oo dawladda Ereteriya ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Isaias Afwerki ay arrintaas beenisay, haddana kooxda TPLF iyo saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay waxay ku andacoodeen in Askar Eriteriyaan ah, oo xirnaa dareeska ciidanka Itoobiya ay joogaan Tigray, kuwaas oo gacan ka siinaya ololaha Abiy Axmed ee ka dhanka ah Tigrayga, sida uu sheegay Vox News.
23-kii Maarso, Abiy Axmed ayaa qudhiisa qirtay joogitaanka ciidamada Ereteriya ee gobolka Tigray, laakiin wuxuu ku dooday in Ereteriya ay ka walaacsan tahay in ay soo weerarto kooxda TPLF, iyo in ciidamada Ereteriya ay baxayaan marka ciidamada Itoobiya ay gacanta ku dhigaan xaaladda.
Ciidamada Ereteriya ayaa la sheegay in ay ka baxeen Tigray-ga kadib markii ay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay dib u qabsatay magaalada Mekelle, balse joogitaankooda iyo ku lug lahaanshaha dagaalka uu Abiy Axmed kula jiro kooxda TPLF ayaan wax muran ahi ka jirin. Haddaba, maxaa u dan ah Ereteriya?
Sida uu qabo aqoonyahan Gaim Kibreab, madaxwaynaha Ereteriya ayaa go’aansaday inuu caawiyo Abiy Axmed, sababtoo ah wuxuu rabaa in TPLF la baabi’iyo. Asalka cadaawadda Ereteriya ee TPLF waxay dib ugu noqonaysaa dagaalkii Eritereeya iyo Itoobiya ee 1998-2000, markaas oo ay isbahaysigii TPLF hogaaminaysay ay ka talinayeen Itoobiya.
Intii uu dagaalku socday waxay ciidamada Itoobiya qabsadeen tuulo ka tirsan dhulka Ereteriya oo lagu magacaabo Badme, waxayna haysteen muddo 18 sano ah ilaa markii ay kooxda TPLF ka saartay dawladdii Itoobiya.
Bishii Juun 2018, Abiy Axmed ayaa ka yaabiyay labada dhinac markii uu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay aqbali doonto gabagabada guddiga Qaramada Midoobay ee xuduudda ee Ereteriya iyo Itoobiya (EEBC), kaasoo faray in dhowr dhul oo lagu muransanaa oo ay ku jirto Badme, dib loogu celiyo Ereteriya, sida ay sheegtay Aljazeera. .
Maamulkiisu waxa uu go’aankaas ku sababeeyey in uu ku andacoonayo in “dadka Itoobiya iyo Ereteriya ay iskaga mid yihiin luuqad ahaan, taariikh ahaan iyo isir ahaanba”, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay. Laakiin madaxwayne Afwerki iyo shacabkiisa ma ilaawin bahdilaadii taliska TPLF ku sameeyay labaatan sano ka hor, ayuu yidhi Kibreab.
Kooxda TPLF ee ka soo horjeeda taliska Itoobiya, hadafkii guud ee Afwerki iyo Axmed – wiiqidii iyo burburkii TPLF – ayaa mideeyay maamulladooda, taasoo keentay in Ereteriya ay ku lug yeelato dagaalka ay kula jirto ciidamada Tigrayga.
Xadgudubyada Xuquuqul Insaanka & Macaluusha ay keentay xannibaadda
Marqaatiyaal kamid ah shacabka Tigrayga ayaa sheegay heerka uu gaarsiisan yahay kufsiga ay ciidamada Itoobiya & Ereteriya u adeegsadaan haweenka Tigrayga ah.
“Kufsigu wuxuu ka bilaabmayaa da’da 8 iyo ilaa da’da 72. Qaar badan, ayaa la kufsaday, kufsigana waxaa lagu sameeyey meelo fagaare ah, qoyska hortiisa, nimanka, qof kasta hortiisa”, ayay tiri haweeney, waxaa soo wariyay The Guardian.
Warbixin ay Amnesty soo saartay oo cinwaan looga dhigay ‘Ma garanayo haddii ay xaqiiqsadeen in aan ahay qof’: Kufsiga iyo tacaddiyada kale ee galmada ee colaadda Tigray ee Itoobiya ayaa muujisay sida ciidamada ay u gaysteen tacaddiyada galmada oo ay u bahdilaan haweenka Tigrayga.
Evelyn Regne, oo hogaamisa guddiga xuquuqda haweenka ee baarlamaanka Yurub, ayaa sheegtay in “in ka badan 500 oo haween ah ay si rasmi ah u soo sheegeen tacaddiyada galmada – laakiin khasaaraha ayaa la filayaa inuu aad uga badan yahay”, ayay raacisay warbixinta.
Kufsiga wadareed ka sokow, macaluul ba’an ayaa sidoo kale ka dhalanaysa. Marka loo eego heerka kala-saarista haqab-beelka cuntada ee isku-dhafan (IPC), index-ka oo markii hore loo sameeyay si loo qiimeeyo macluushii ba’aneyd ee Soomaaliya 2011, in ka badan 350,000 oo qof oo Tigray ah ayaa hadda wajahaya wejiga 5 “masiibo”, halka in ka badan shan milyan oo qof ay soo food saartay wajiga 3 cunto “dhibaato” iyo wajiga 4-aad cunto “xaalad degdeg ah”.
Cunto (la’aanteeda), sida kufsiga, ayaa loo adeegsadaa hub lagu burburiyo jabhadaha. Sida laga soo xigtay xisaabaadka goobjoogayaasha, ciidamada Itoobiya iyo Eritereeya, intii ay ku sugnaayeen Tigrayga, waxay gubeen dalagyo, bakhaarro, iyo waxay dileen xoolo muhiim ah, ayuu sheegay Vox News.
Waxaas oo dhan waxaa u sii dheer in ciidamada Itoobiya ay gabi ahaanba xanibeen gargaarkii bini’aadantinimo ee la gaarsiin lahaa qeybo ka mid ah gobolka Tigray, eedeymahaas waxaa xaqiijisay QM, balse waxaa beenisay dowladda dhexe.
Nabad mala rajeyn karaa wakhti dhow?
Inta uu dagaalku sii jiro, way adkaanaysaa rajada nabadda. Intaa waxaa dheer, ilaalinta nabadda waa sida ay u adag tahay in la keeno, haddii aysan ka badnayn.
Si wax looga qabto dhibaatooyinka kor ku xusan, waxa loo baahan yahay in si degdeg ah loo maro waddo cad, oo ay ku heshiiyeen dhammaan dhinacyada, xabad joojinta, wadahadalka nabadda, dib u dhiska dagaalka, iyo wax ka qabashada xadgudubyada ballaaran ee xuquuqda aadanaha ee dhacay 11-kii bilood ee la soo dhaafay.
Si nabad loo gaaro, waxaa loo baahan yahay wadahadal hufan oo RW Abiy Axmed iyo xubnaha sarsare ee maamullada la yeeshaan madaxda fallaagada ah ee TPLF, waxayna u baahan tahay is-aaminaad dhexmarta Tigreega iyo qoomiyadaha kale ee Itoobiya, gaar ahaan Oromada iyo Amxaarada.
Faragelinta dibadeed ee ku wajahan nabadda waxay u baahanaan doontaa dhexdhexaadin ka timaada waddamada deriska la ah sida Soomaaliya, Kenya iyo Rwanda, kuwaas oo loogu baahan yahay inay kawada hadlaan siddii loo soo afjari lahaa dhibaatada ka taagan dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Dhinaca kale, xaaladdaan cakiran waa arrin u taallo midowga Afrika haddii ay noqon lahayd tillaabo militari iyo haddii ay noqon lahayd tillaabio wadahadal oo aysan ka marneen is aaminaad.
Related Topics:FeaturedSiday Itoobiya ku gaartay halkaan iyo doorka Qowmiyadaha kala duwan?
Cabdijabaar Sh. Axmed waa qoraa iyo macalin jaamacadeed oo wax ka dhiga Jaamacadda Dowladda iyo Dhaqaalaha (The University of Government and Economics). Waa tifatiraha guud ee majaladda Diblomaasi. Waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibedda, diblomaasiyadda, sharciyadda caalamiga. Wuxuu kaloo wax ka qoraa maareynta ganacsiga, dhaqaalaha, falsafada, horumarka bulshada iyo nabadgelyadda. Qoraaga waa qoraa dhawaanahan qoray buuggaag iyo qoraallo kala duwan oo aan dhanka wax tarka kala dhicin.
Frederik Willem de Klerk wuxuu ahaa Madaxweynihii ugu dambeeyay ee midab kala sooca ayaa ku geeriyooday da’da 85 sano kadib markii uu muddo la tacaalayay cudurka kansarka.
Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika FW de Klerk ayaa ku geeriyooday gurigiisa magaalada Cape Town isagoo 85 jir ah, sida la shaaciyay Khamiistii maanta.
“Waa murugo aad u weyn in FW de Klerk Foundation ay ku dhawaaqdo in Madaxweynihii hore FW de Klerk uu si nabad ah ugu dhintay gurigiisa oo ku yaal Fresnaye subaxnimadii hore ee saakay ka dib halgankii uu kula jiray kansarka mesothelioma,” ayaa lagu yiri bayaanka. “Mr De Klerk waxa uu jiray 85 sano jir, waxa uu ifka kaga tagay xaaskiisa Elita, caruurtiisa Jan iyo Susan iyo waxa uu awoow u yahay”.
Hay’adda Nelson Mandela Foundation ayaa tacsi u diray. Mu’asasada Nelson Mandela ayaa muujisay sida ay uga xun yihiin geerida de Klerk, waxayna tacsi u dirtay qoyskiisa.
“Dhaxalka De Klerk waa mid weyn, sidoo kale waa mid aan sinnayn, wax dadka Koonfur Afrikaan ah loogu yeeray inay ku xisaabtamaan xilligan,” ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Kormeerka ku-meel-gaadhka dimuqraadiyadda Koonfur Afrika. De Klerk waxa uu kormeeray maalmihii ugu dambeeyay ee uu jiray nidaamkii midab-takoorka, waxaana xilka kala wareegay Nelson Mandela 1994-tii doorashadii ugu horreysay ee dimuqraadi ah.
Sannadkii 1990-kii de Klerk waxa uu mamnuucay ururka African National Congress (ANC) oo ay dawladdii midab-takoorka u aqoonsatay koox argagixiso. De Klerk waxa uu Mandela la wadaagay abaalmarinta nabadda ee Nobel, oo uu kala shaqeeyay in uu si buuxda u burburiyo nidaamkii midab-takoorka.
De Klerk ayaa dhaleecayn kulul kala kulmay muxaafidiinta iyo garabka midig kuwaas oo ku tilmaamay khaa’inul waddan in uu xukunka ku wareejiyo ANC. Waxaa kaloo lagu dhaleeceyay falalka ay ku kacayaan ciidamada ammaanka iyo qalalaasaha ay ku caburinayaan dadka ka soo horjeeda siyaasadda sannadihii fowdada ahaa ee ka horreeyay in dalku uu u guuro dimuqraadiyad.
Yaa bilaabay aragtidaan midabtakoor?
Hendrik Verwoerd ayaa inta badan loogu yeeraa naqshadeeyaha midab-takoorka doorkii uu ku lahaa qaabeynta hirgelinta siyaasadda midab-takoorka markii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo ka dibna noqday ra’iisul wasaaraha.
Hendrik Frensch Verwoerd 8 Sebteembar 1901 – 6 Sebtembar 1966) wuxuu ahaa siyaasi Koonfur Afrikaan ah, aqoonyahan cilmi-nafsiga iyo cilmiga bulshada, iyo tifaftiraha guud ee wargeyska Die Transvaler. Waxaa caadi ahaan loo arkaa inuu yahay naqshadeeyihii Apartheid.
Waxa uu kaalin mug leh ka qaatay midabtakoorkii injineernimada bulsheed, nidaamkii dalka ee hay’adihii kala soocida jinsiyadeed iyo sarraynta cadaanka, iyo fulinta siyaasadihiisa sida Wasiirka Arrimaha Gudaha (1950-1958) iyo ka dibna ra’iisul wasaare (1958-1966). Intaa waxaa dheer, Verwoerd wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray caawinta xisbiga midigta fog ee Xisbiga Qaranka inuu yimaado xukunka 1948, isagoo u adeegaya istaraatiijiyaddooda siyaasadeed iyo dacaayad, isagoo noqday hogaamiyaha xisbiga markiisii ​​hore.
Wuxuu ahaa Midowgii Koonfur Afrika Ra’iisul Wasaarihii ugu dambeeyay, 1958-kii ilaa 1961-kii, markaasoo uu ku dhawaaqay asaaskii Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, isagoo ra’iisul wasaarihiisa sii ahaan jiray illaa laga dilay 1966-kii.
Sidee buu Nelson Mandela u soo afjaray midab-takoor?
Mandela waxa uu 27 sano u xidhnaa la dagaalanka midab-takoorka. Markii la sii daayay, waxa uu gorgortan ka galay in la soo afjaro siyaasadda cunsuriyadda, waxaana loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika. Mandela waxa uu de Klerk kala xaajooday dastuur cusub oo ogolaanaya in aqlabiyadda la xukumo.
Markii hore, Mandela iyo xubnaha kale ee ANC waxay adeegsadeen xeelado aan rabshad lahayn sida shaqo-joojin iyo mudaaharaad si ay uga dhiidhiyaan midab-takoorka. 1952, Mandela waxa uu gacan ka gaystay kor u qaadida halganka isagoo ah hogaamiyaha Ololaha Diidmada, kaas oo ku dhiirigeliyay ka qaybgalayaasha Madoow inay si firfircoon u jebiyaan sharciyada. In ka badan 8,000 oo qof – oo uu ku jiro Mandela – ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ku xad-gudbeen bandow, diiday inay qaataan warqado aqoonsi iyo dembiyo kale.
Sanad kadib markii ay colaada ka bilaabatay waqooyiga Itoobiya ayaa waxaa isa soo taraya cabsida laga qabo in ciidamada TPLF ay dhawaan gaaraan magaalada Addis Ababa. Maalmihii la soo dhaafay, waxaa sare u sii kacayay xarigga loo geysanayo dadka Tigrayga ah ee ku nool caasimadda dalkaas.
Sawirka waa weerar cirka ah oo ay qaadeen ciidamada dawladda 20-kii Oktoobar. Milatarigu waxay sheegeen in ay bartilmaameedsanayaan xarun lagu farsameeyo hubka oo ay maamusho Jabhadda Xoraynta Tigrayga (TPLF), taasoo ciidammada fallaagada Tigray ay beeniyeen.
Markii uu Aadam ku soo laabtay gurigiisa ka dib markii uu soo timo jartay subaxnimadii Sabtida, Noofambar 6, waxa uu arkay waalidkii iyo walaashii oo lagu qasbayo gaadhi booliis ah. Waxaa la socday laba qoys oo kale oo ku noolaa xarunta – dhamaantood waxay asal ahaan ka soo jeedaan qowmiyada Tigreega. Ka hor inta uusan bixin, Aadam hooyadiisa waxaa u suurtagashay in ay xirto guriga, ayuu yiri, iyada oo wadata furaha kaliya ee gurigooda.
“Aabbahay wuxuu qabay wadno xanuun, cudur buu qabaa, daawadiisuna guriga ayay taallaa, waa in uu kaniiniga qaataa maalin kasta,” ayuu yidhi Aadam oo aan qarin karin welwelkiisa. “Waxaan nahay dad rayid ah […] Ma garanayo waxay isku dayayaan inay nagu sameeyaan.” Aabihii ayaa dhawaan laga eryay shaqadii uu ka hayay TV-ga dowladda, hooyadiina waa guri joog. Weli looma oggolaan inuu soo booqdo iyaga oo xidhan.
Kordhinta xadhigga aan sharciga ahayn
Tan iyo markii ay bilowdeen iskahorimaadka Tigray-ga bishii Nofeembar 2020, baaritaanada guryaha iyo xarigga aan sharciga ahayn ee loo gaysto qowmiyadda Tigrayga ayaa caadi ka noqday caasimadda Itoobiya. Iyadoo lagu dhawaaqay xaaladda degdegga ah Talaadadii, xaaladdu waxay u muuqataa mid ka sii daraysa.
“Waxay awood u siiyeen bilayska inay wax walba sameeyaan, ku dhibaateeyaan oo ay ku qabtaan sabab la’aan, waxayna u tagi karaan wax kasta oo gurigaaga ah,” ayay tiri Tigist, oo ah gabadh dhalinyaro ah oo ka soo qaxday Tigray bilo ka hor. Ciidamo boolis ah ayaa dhawaan u yimid guri ay ka daganeyd magaalada Addis Ababa si ay u weydiiyaan aqoonsigeeda, balse waxay ku sugneyd shaqada.
Tigist kuma aysan dhalan Tigray, inkastoo qoyskeeda ay ka soo jeedaan halkaas, taasoo u sahlaysa inay qariso qowmiyadeeda. Saaxiibadeed, si kastaba ha ahaatee, waxay ku nool yihiin cabsi joogto ah. “Aad bay u welwelsan yihiin, ma rabaan inay bannaanka joogaan habeenkii,” ayay sharraxday. Dhawr ka mid ah asxaabteeda waa la xidhay laakiin ka dib waa la sii daayay. Mid kale ayaa laga qabtay wadada kadib markii ciidamada booliska ay weydiiyeen aqoonsigiisa, Tigist ayaa sheegtay sidaas.
Afhayeen u hadlay booliiska ayaa ku adkaystay in dadka la xidhay ay si toos ah ama si dadbanba u taageerayaan ururka Tigray People’s Liberation Front (TPLF) oo ay dawladdu ku tilmaantay urur argagixiso bishii Maay ee la soo dhaafay. Iyadoo ay weli adag tahay in la qiimeeyo baaxadda xadhigaasi, ayaa hay’adaha xuquuqul insaanka ka walaacsan yihiin.
“Waxaan aad uga walaacsanahay awoodaha baahsan ee la siiyay ciidamada ammaanka iyada oo loo marayo xaaladda degdegga ah iyo khatarta ah in ay siisay sharci oo ay sharciyeyso isbeddellada iyo dhaqamada aan ku aragnay Addis Ababa ku dhawaad ​​​​intii uu bilowday khilaafka,” Laetitia Bader, oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee Human Rights Watch, ayaa u sheegay DW. “Waa xaalad aad looga naxo oo soo wajahday bulshada oo siyaabo kala duwan ugu noolaa cabsi badan sannadkii u dambeeyay.”
Caasimada Addis Ababa ma halis ayay ku jirtaa?
Xaalada ayaa ku soo beegmaysa xili ciidamada Tigreega oo qayb ka ah kooxda TPLF ay sheegeen in ay ku wajahan yihiin dhanka koonfureed ee Addis Ababa iyo dhanka bari ilaa wadada wayn ee isku xidha caasimada iyo Jabuuti. Ururka ayaa ku dhawaaqay in ay ku biireen ciidamo kale oo la yiraahdo Oromo Liberation Army (OLA), kuwaas oo sheegay in laga yaabo in ay todobaadyo ka harsan yihiin in ay caasimadda gaaraan.
Getachew Reda, oo ah hogaamiyaha kooxda TPLF ayaa yidhi “Markabkii [Raysalwasaare] Abiy ayaa si degdeg ah u quusaya, wuxuuna u degayaa si xawli ah, sababta ay dadka Tigreega iyo Oromada ah ee aan waxba galabsan ugu ururinayaan qaybaha kale ee Itoobiya waxay u badan tahay inay u adeegsadaan heshiisyo ganacsi. ayaa lagu yiri qoraal uu soo dhigay Twitter fiidnimadii Sabtida.
Iyadoo la eegayo mustaqbalka aan la hubin, dhowr safaaradood ayaa kula taliyay muwaadiniintooda inay ka baxaan dalka iyadoo duulimaadyadii ganacsiga ay weli socdaan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa amartay in la daadgureeyo dhammaan shaqaalaha diblomaasiyadeed ee aan muhiimka ahayn.
Balse dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in jilayaasha reer galbeedka, gaar ahaan kuwa warbaahinta ay aad uga falceliyeen, waxayna meesha ka saartay sheegashada fallaagada oo ay ku tilmaameen dacaayad. Sidoo kale, shacabka Addis Ababa ayaa laga codsaday inay is abaabulaan, hubkoodana diiwaan geliyaan, una diyaar garoobaan inay dalkooda u dagaalamaan. “Anaga, Xabashida ah, in aan u dhimanno qaranimadeena, midnimadeena iyo aqoonsigeena, waxay noo tahay sharaf,” ayaa lagu yiri war kasoo baxay dowladda Sabtidii.
Falanqeeyayaasha ayaa u arka iska hor imaadkan muuqda inuu yahay dariiq ay dowladdu ugu diyaargaroobeyso halgan hubaysan iyadoo rajeynaysa inay xaddiddo kacdoonka shacabka.
Dadka deegaanka ayaa dareeno kala duwan ka bixiyay khatarta ku soo fool leh caasimadda. Mid ka mid ah darawallada tagsiilaha ayaa sheegay in uusan walwal qabin balse si kastaba ha ahaatee, dadka deegaanka intooda badan waxay ku nool yihiin af-gacmo mana awoodaan inay kaydsadaan cuntada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah.
Saldhigga taageerada dawladda oo la soo bandhigay
Waxaa sidoo kale jirta aaminsanaan iyo rajo ay ka qabaan qaar ka mid ah dadka Itoobiya in Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu heli karo waddo uu kaga adkaado dagaalyahannada Tigrayga. Arrintan ayaa soo shaac baxday subaxnimadii Axadda, markii kumannaan qof oo mudaaharaadayaal ah ay isugu soo baxeen bannaanbax lagu taageerayey dawladda oo ka dhacay fagaaraha Meskel, oo ah goobta ugu weyn ee ay isugu yimaadaan caasimadda.
Qaar ka mid ah dadka mudaaharaadayay ayaa ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee Ezema. “Waxaan halkaas ugu baxnay in aan niraahno inkasta oo aan ku kala aragti duwannahay fikradaha siyaasadeed, marka ay timaado difaacidda madaxbannaanida iyo midnimada dalka, waxaan u taagannahay wadajir,” Nathenael Aberra, madaxa xiriirka dadweynaha ee xisbiga Ezema, ayaa u sheegay DW.
“Waxaan aaminsanahay in waxa ay kooxda TPLF iyo xulafadeeda wadaan ay yihiin kuwo khatar ku ah qaranimada iyo wadajirka dalka iyo sidoo kale amniga muwaadiniinta, ma fadhiisan karno oo aan aragno ujeeddooyinkooda.
Qoob-ka-ciyaarka ay ku dhawaaqayeen askarta Itoobiya, dibadbaxayaashu waxay lulayeen calanka Itoobiya, waxayna wateen boorar ay ku qoran yihiin “Jooji wararka been abuurka ah ee Itoobiya,” oo ay ku beegsanayaan hay’adaha warbaahinta reer galbeedka. Iyada oo lagu dhex jiro khudbadaha guusha ee firfircoon, hal cod ayaa ku baaqay raalligelin. Fanaanka caanka ah ee u dhashay dalka Itoobiya Tariku Gankisi ayaa ka yaabiyay dadkii goobta isugu soo baxay isaga oo ku sii jeeda masraxa ugu weyn ee uu ku soo bandhigayay bandhiga “Dishta Gena” oo ka mid ah heesaha ugu caansan sanadkan.
“Innagu filan! Dhegahayagu way dhiig baxayaan. Maxaynu hore ugu soconnaa haddaynu dhimanno?” Dadkii oo yaaban ayuu ku qayliyey. “Ku filan madfacyada!”
Dadaalka diblomaasiyadeed ee u dambeeyay
In kasta oo xabbad-joojintu ay weli u muuqato suurtogalnimo fog, haddana waxa muuqata inay muuqato rajo ah oo ka soo baxaysa dhinaca diblomaasiyadda. Madaxa Qaramada Midoobay Martin Griffiths iyo Wakiilka Sare ee Midowga Afrika ee Geeska Afrika Olusegun Obasanjo ayaa lagu soo waramayaa inay ka degeen magaalada Mekele ee xarunta gobolka Tigray Axaddii. Sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Reuters, Getachew Reda oo ka tirsan kooxda TPLF ayaa xaqiijiyay in ay wada hadal yeelanayaan.
Iyadoo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Jeffrey Feltman uu labo maalmood ku qaatay Addis Ababa, dadaal ay dad badan u arkeen inuu yahay fursadii ugu dambeysay ee heshiis wada hadal ah. Mid ka mid ah ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu ogolaaday dadaallada dhex dhexaadinta ee uu Mareykanku hormuudka ka yahay, balse kuwo kale ayaa tilmaamay in kulammada aysan si wanaagsan u socon.
Maqnaanshaha xabbad-joojin laga wada-hadlay, xaaladdu waxay weli u muuqataa mid xun. Kooxda TPLF ayaa beenisay in imaatinkooda Addis Ababa uu keeni doono dhiig badan, taas oo muujinaysa in kooxda TPLF iyo OLA ay doonayaan oo kaliya in ay xukunka ka tuuraan – laakiin sida uu xaalku noqon doono iyada oo aan iska hor imaad la’aani dhicin ayaan wali caddayn.
Iyadoo uu sii kordhayo dagaalka sokeeye ee ka socda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, ayaa Kenya iyo Koonfurta Suudaan waxa ay ku jiraan heegan sare.
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay adkeyneyso ammaanka xadka ay la wadaagto dalka Itoobiya oo dhan 800-km. Booliska kenya ayaa sidoo kale dhigay jidgooyo dheeraad ah oo lagula socdo dhaq dhaqaaqa hubka iyo dadka ajaanibta ah ee isku dayaya in ay si sharci darro ah ku galaan dalka Kenya.
Bulshooyinka deegaanka iyo dawladda ayaa ka cabsi qaba qulqulka qaxoontiga Itoobiya, iyadoo dagaalka ka socda waqooyiga gobolka Tigray uu ku qulqulayo degaannada kale ee Itoobiya iyo dagaalyahannada Tigreega iyo xulafadooda ay ku sii qulqulayaan caasimadda Addis Ababa.
Woqooyiga Kenya waxa ay horay hoy ugu noqotay xeryaha qaxootiga Kaakuma ee waqooyi galbeed iyo Dhadhaab ee waqooyi bari. Waxay ka mid yihiin degsiimooyinka qaxootiga ee ugu weyn adduunka.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, mas’uuliyiinta Kenya ayaa aad ugu dadaalayay in gabi ahaan xeryaha la xiro bartamaha sanadka 2022-ka -qorshahaas oo laga yaabo in ay carqaladeeyaan qaxootiga cusub ee ka imaanaya Itoobiya.
Booliiska Kenya ayaa horay uga digay muwaadiniinta inay soo sheegaan kiisaska dadka aan sharciga lahayn iyo soo galootiga aan la marinin hab-raaca ee dalka.
Woqooyiga Kenya ayaa mar horeba ku jiray walaac
“Waxa jirta suurtogalnimo [boqolaal kun], haddaysan ahayn malaayiin qaxooti ah, inay ku soo qulqulaan Kenya,” ayuu agaasimaha Machadka Daraasaadka Istiraatiijiyadeed ee fadhigiisu yahay Nayroobi, Hassan Khanaje, u sheegay wakaaladda wararka ee DW. Tani waxay “ku soo rogi doontaa kharash culus Kenya,” ayuu yidhi, isaga oo intaa ku daray in ay dhalin karto xaalad bini’aadantinimo oo aanay Kenya diyaar u ahayn.
Qaxootiga faraha badan ee ku sugan waqooyiga Kenya ayaa ku adkeystay kheyraadka deegaanka ee gobolka, waxaana ay sii hurinayaan xiisadda ka dhex taagan bulshada deegaanka. Labo milyan oo qof ayaa hadda wajahaya cunno yari ka jirta waqooyiga Kenya, halkaasoo Qaramada Midoobay ay ku tilmaantay xaalad “mid aad u daran” sababtoo ah roob yari darteed.
Ganacsiga labada dal ayaa sidoo kale hoos u dhacay sababtoo ah dagaalka Tigray, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Kenya. Horaantii sanadkan, Kenya iyo Itoobiya waxay samaysteen Boostada Mooyaale Ones Stop Border, oo ah goob ganacsi oo xor ah si loo fududeeyo ganacsiga xudduudaha isaga gudba.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa todobaadkii hore ka codsaday in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya ciidamada Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed iyo dagaalyahanada Jabhadda Tigreega ee TPLF. “Ragga iyo haweenka dawladda Itoobiya oo uu ugu horreeyo walaalkayga aan jeclahay ee hoggaanka u haya, Abiy Axmed iyo sidoo kale ragga iyo dumarka ka kooban hoggaanka dagaalka kula jira dawladda waa in ay raadiyaan sabab ay degdeg u joojiyaan colaadda oo ay wada hadlaan. Kenyatta ayaa ku yiri bayaan uu soo saaray Arbacadii la soo dhaafay.
Heshiiskii nabadeed ee Koonfurta Suudaan ayaa halis ku jira.
Colaadda Itoobiya ayaa u muuqata mid si dadban u wiiqday dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee dalka ay deriska yihiin ee Koonfurta Suudaan.
Itoobiya, ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ay door dhexdhexaadin ah ka waday dhinacyada isku haya Madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyihii hore ee mucaaradka Riek Machar. Labada heshiis nabadeed ee ugu waaweyn Koonfurta Suudaan, oo la kala saxeexday 2015 iyo 2018, labaduba waxay ku wadahadleen Itoobiya.
Waxaa intaas dheer in beesha caalamku ay waqti iyo tamar badan u weecinayso Itoobiya, ayuu yiri Boboya James oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka socda machadka siyaasadda bulshada iyo cilmi baarista ee fadhigiisu yahay Juba. “Caadiyan beesha caalamku waxay ku boorin jirtay dowladda Koonfurta Suudaan inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii nabadda, balse hadda waxay u muuqataa in dareenkooda loo weeciyey xallinta colaadda Itoobiya,” ayuu James u sheegay.
“Waad arki kartaan in Maraykanku uu hadda waqti badan ku bixinayo sidii uu u waydiisan lahaa labada garab ee Itoobiya inay wadahadlaan oo ay nabad keenaan.” Waxa uu ka cabsi qabaa in geedi socodka nabada Koonfurta Suudaan uu noqdo mid aan laga maarmi karin, maadaama dagaalka Itoobiya uu sii daba dheeraaday.
Hubanti la’aan dadka Koonfurta Suudaan ee Itoobiya
Boqolaal kun oo qof oo ka soo qaxay dagaalka Koonfurta Suudaan ayaa magangalyo ka helay gobolka Gambela ee dalka Itoobiya oo ku yaalla xadka galbeed ee Suudaan uu la wadaago Itoobiya.
Bulshooyinka ku nool labada dhinac ee xuduudka ayaa leh xiriir dhaqan oo aad u weyn, gaar ahaan dhanka Itoobiya oo soo gala Koonfurta Suudaan. “Inta badan dadka Koonfurta Suudaan ee ku sugan xuduudda waxay cunno ka helaan Itoobiya,” ayuu yiri James. Markaa haddii uu dagaalka Itoobiya sii socdo, waxa hubaal ah in uu khalkhal dhaqaale u keeni doono xadka u dhexeeya Koonfurta Suudaan iyo Itoobiya,” ayuu yidhi.
Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri Museveni ayaa 16-kii bishan ku baaqay shir aan caadi ahayn oo ay isugu imaanayaan madaxda urur goboleedka IGAD, kaasi oo ka dhici doona magaalada Kampala 16-ka bishan Nofeembar. Itoobiya ayaa xubin ka ah 8-da xubnood oo ay ku jiraan Kenya, Ugandha, Suudaan, Koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo Jabuuti.
IGAD, oo gacan ka geysatay dhexdhexaadinta heshiiska nabadeed ee Koonfurta Suudaan, ayaa rajaynaya in door la mid ah kii hore ee Itoobiya. Dhanka kale waxaa socda dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu xaliyo dagaalka ka socda Itoobiya. Ergooyinka Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa wada-hadallo deg deg ah ku yeelanaya dalka Itoobiya, iyagoo raadinaya xabbad joojin.
Ku-xigeenka Xoghayaha Qaramada Midoobay ee arrimaha bini’aadantinimada, Martin Griffiths, ayaa booqday gobolka Tigray maalintii Axadda, isaga oo ka faa’iidaysanaya munaasabaddan si uu ugu codsado in si weyn loo gaarsiiyo gargaarka dadka rayidka ah. Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in ilaa 7 milyan oo qof oo ku nool Itoobiya, oo ay ku jiraan 5 milyan oo Tigray ah, ay wajahayaan xaalado macaluul oo kale ah dagaalka ka jira halkaas awgeed.
Xaaladda dalka Itoobiya aya meel cakiran mareysa. Xoogagga mucaaradka ee ay Jabhadda TPLF ugu tun weyn tahay ayaa qabsaday magaalooyin halbowle ah dalkaas, wararka qaarna waxa ay shegayaan in wax ka yar 200 mile ay u jiraan caasimadda Addis Ababa. Maxaa lagu cabiri karaa mustaqbalka Itoobiya?
Nofeembar 4, 2020, militariga Itoobiya ayaa la geeyay gobolka Tigray si ay u burburiyaan ciidamada daacadda u ah xisbiga talada haya ee gobolka waqooyi, Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigrayga (TPLF), taasoo jawaab u ah waxa ay dowladdu ku sheegtay weerar lagu qaaday xeryo ciidan oo ay leedahay dowladda federaalka.
Howlgalkaan ayaa u ekaa mid lagu degdegay, balse sanad kadib colaada ayaa kusii fiday xuduuda gobolka, taasoo sababtay masiibo bini’aadantinimo oo aad u ba’an, dalkana waxa uu galay xaalad adag oo u muuqata mid aan laga fursan karin, iyadoo jabhaduhu ay ku andacoonayaan inay u soo dhaqaaqeen dhanka caasimada Addis Ababa.
Tan iyo markii uu dagaalku billowday, waxaa dhacay kufsi iyo xasuuq baahsan oo loo geystay dad rayid ah. Ilaa bishii Janaayo, hay’adaha gargaarku waxay qeylo dhaan ka soo saareen sida ay xaaladdu uga sii dari karto. Dagaalada sii socda, caqabadaha maamulka iyo go’doominta gargaarka ayaa tan iyo markaas horseeday macaluul sii socota oo saamaysay boqolaal kun oo qof. In ka badan laba milyan oo qof ayaa ka barakacay guryahooda, tobbanaan kun oo kalena waa ay ku dhinteen.
Ku dhawaaqista xaaladda degdegga ah ee guud ahaan dalka ay ku dhawaaqday dowladda federaalka Talaadadii ayaa dhalisay cabsi laga qabo xasillooni darro hor leh. Safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa sidoo kale soo saartay la-talin dhanka socdaalka ah, iyadoo uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan Itoobiya.
“Colaadda waxaa loo soo bandhigay qaab-hawlgal sharci-fulin ah oo socon doona dhowr toddobaad,” ayuu yiri Awet Weldemichael, khabiir ku takhasusay amniga Geeska Afrika iyo borofisoor taariikhda ka dhiga Jaamacadda Queen’s, Ontario. “Sannad ka dib, waxaan tan iyo markaas aragnay inay isu beddeshay dagaal bahalnimo ah oo lagu burburinayo oo lagu baabi’inayo Tigray, iyo hadallada baabi’inta qowmiyadaha ay caadi ka noqotay.”
Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay dagaalka 28-kii Nofeember 2020, ka dib markii ciidamada federaalku ay qabsadeen caasimadda Tigray ee Mekelle. Isaga oo ku baashaalaya guusha oo huwan dhar-gashi iyo bareer ciidan oo cad, kasoo haddana ku guulaystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel waxa uu u safray magaalada dhawr toddobaad ka dib si uu ugu hambalyeeyo isu imaatinka taliyayaashiisa milatariga.
Laakiin guusha waxay noqotay mid dhicis ah. Muddo bilo gudahood ah ayuu dagaalku isu rogay waxaana ugu dambayntii ciidamada Tigreegu ay dib u qabsadeen dhulkooda intiisa badan waxayna waddeen weeraro rogaal celis ah oo ay ku qaadeen gobolada ay dariska yihiin ee Axmaarada iyo Canfarta.
Dagaalyahannada isbahaysiga ah ee ka tirsan jabhadda xoraynta Oromada (OLA) oo tan iyo sannadkii 2019 dagaal kula jirtay ciidammada Itoobiya ee gobolka Oromada, ayaa hadda si cad u gaaf wareegaya dhammaan degmooyinka gobolka, waxaana la sheegay inay ku hanjabeen inay u safri doonaan magaalada Addis Ababa.
“Ciidamada gaarka ah ee Axmaarada ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday fariisimahayaga Kemise, laakiin waanu iska caabinay,” Odaa Tarbii, afhayeenka OLA, ayaa u sheegay Al Jazeera Arbacadii. “Marka la eego kala-guurka, OLA iyo xulafadeeda waxay ka shaqeyn doonaan xasilinta dalka si looga fogaado fowdo suurtagal ah.”
Qalalaasaha noocan oo kale ah ma’ahan wax ku cusub dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika, muddo dheer waxaa loo tixgeliyey in uu yahay ifka xasilloonida gobolka, laakiin hadda waxa uu halis ugu jiraa inuu isu-bedelo dhul balaarsi – waa nasiib xumo soo wajahday RW Abiy Axmed, laba sano ka dib.
Dhanka kale, magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku yaal waqooyiga dalka ayaa weli ah kuwo aysan heli karin hay’adaha gargaarka, xitaa iyadoo cunnada iyo sahayda caafimaad ay sii yaraanayaan iyadoo ay jiraan warbixinno naxdin leh oo sheegaya xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo dhimashada ay sababayso gaajada.
“Marka loo eego dhinacyo badan oo shaqada dawlada ah, dawladda Itoobiya qayb ahaan way burburtay,” ayuu yiri Awet. “Marka uu gobolku ku guul-darraystay inuu dadka gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah, waa mid fashilmay. Nasiib darro, waa meesha ay hadda Itoobiya isku aragto.”
In kasta oo ay jabhaduhu horumarro ka sameeyeen xuduudo badan oo ay iska caabiyeen duullaan dhinaca cirka iyo dhulka ah oo ay Itoobiya ku qaadday gobolka Axmaarada bishii hore, dawladda Itoobiya waxay sii waddaa diidmada baaqyada Maraykanka, Ruushka iyo Midowga Yurub, iyo kuwa kale, ee wada-hadallada.
Taa bedelkeeda, Addis Ababa waxay xoojisay qoritaanka ciidan badan waxayna rajeyneysaa in la soo sheegayo iibsashada-suuq-geynta hubka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hub kale, iyo sidoo kale qulqulka ciidamada Eritrea oo uu diyaar u yahay Madaxweyne Isaias Afwerki oo ay isku dhow yihiin, inay siin karaan iyaga.
“Dadkeennu waa inay arrimaha oo dhan dhinac iska dhigaan, oo si rasmi ah isu diiwaan-geliyaan [ciidamada qalabka sida] si ay uga adkaadaan oo ay u aasaan argagixisada TPLF ee u soo baxday inay burburiso,” RW Abiy Axmed ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray baaq isu soo bax ah oo Axaddii. “Waxaan dhammaanteen ugu baaqayaa inaan midowno si aan gabasho lahayn oo aan u difaacno Itoobiya.”
Fariinta ayaa timid waxyar kadib markii la sheegay in khasaare uu soo gaaray dhamaadkii todobaadka, kaasoo ahaa xudunta u dambeysay dagaalka, gudaha iyo hareeraha magaalada istiraatiijiga ah ee Amxaarada ee Dessie, oo 400km (250 mayl) waqooyi bari kaga beegan Addis Ababa. Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay qabsadeen Dessie, iyo sidoo kale magaalada dariska la ah ee Kombolcha oo kala qaybisa wadada Addis Ababa iyo Jabuuti.
Xoghayaha Arimaha Dibada ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in uu “ka walaacsan yahay” wararka sheegaya qabsashada labada magaalo wuxuuna ku booriyay Tigrayga in ay joojiyaan horusocodka.
Laakiin guulaha la gaaray ayaa u muuqda in ay dhiiri galiyeen ciidamada Tigreega. Muddo bilo ah, saraakiisha Tigreega, oo sheegay in weerarka la soo sheegay ee lagu qaaday xerooyinka federaalka sanad ka hor uu ahaa qorshe loogu talagalay weerar “isku-dubbarid” ah oo ka dhan ah Tigrayga, waxay ku adkaysteen in wada xaajoodku yahay habka kaliya ee lagu soo afjarayo khilaafka. Laakiin faallooyinka uu bixiyay isniintii wareysi uu siiyay TV-ga gobolka Tigrai, taliyaha Tigrayga Jeneraal Tsadkan Gebretensae ayaa u muuqday inuu soo jeedinayo in ciidamadiisu aysan hadda ka dib u degi doonin heshiis dhexdhexaadin ah.
“Ma na siinayaan xulashooyin kale laakiin inaan tan ku dhameyno goobta dagaalka,” ayuu yiri Tsadkan. “Dawladdani waxay dalka ku ridday bohol. Waxaan u baahannahay inaan bilowno inaan weydiinno wada-xaajoodyada aan la leenahay dowladdan”
Muddo dheer oo dagaalku socday, eedeymaha ku saabsan xad-gudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ayaa si joogta ah meesha looga saaray iyadoo ay been abuur tahay dowladda Itoobiya oo muddo bilo ah xitaa diiday joogitaanka askarta Eritrea. Wakaaladaha wararka iyo hay’adaha xuquuqul insaanka oo laga mamnuucay in ay ka waramaan gobolka, waxay miciin bideen in ay adeegsadaan waraysiyo, sawir-qaade dayax-gacmeed iyo muuqaal juqraafi ah si ay u xaqiijiyaan xisaabaadka dilalka baahsan ee dadka rayidka ah loogu geystay magaalooyinka sida Mai Kadra, Axum iyo Adigrat.
Muuqaalo naxdin leh oo ku saabsan gabood-fallada, sida xasuuqii Mahbere Dego oo muuqaal laga duubay, muuqaalo murugo leh oo caruur gaajaysan iyo marqaati sheegay dhibanayaasha kufsiga ayaa dhaliyay cambaarayn baahsan. Jabhadda ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay xasuuq ka geysatay gobolka Axmaarada oo uu ka mid yahay xasuuqii bishii Sebteember lagu xasuuqay in ka badan 100 qof oo rayid ah tuulada Chenna.
Mareykanka ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah Itoobiya, Eritera iyo kooxda TPLF ee dagaalka qeyb ka ah, waxaana madaxweyne Joe Biden uu caddeeyay in la tixgelinayo tallaabooyin dheeri ah.
Dhanka kale, arxan-darrada baahsan iyo hadallada kicinta ah ee lagu baahinayo baraha bulshada ayaa sii xumeeyay xiisadda qowmiyadeed, iyadoo dagaalku uu sidoo kale keenay burbur dhaqaale oo ay ka mid yihiin sicir-bararka cirka isku shareeray iyo qiimaha maciishadda.
Laakiin dad badan ayaa sheegaya in colaada Tigraygu ay sidoo kale muraayad u tahay dagaalkii sokeeye ee ugu dambeeyay ee Itoobiya kaasoo diirada saaray isbahaysi fallaago ah, oo ay ku jirtay TPLF, olole sanado qaatay oo ka dhan ah dawladdii shuuciga ahayd ee Mengistu Hailemariam.
Mengistu waxa si la mid ah loogu eedeeyay in uu gaajada hub ahaan u isticmaalay oo uu wax ka taray “macluushii Kitaabka Quduuska ah” ee 1984, taas oo laga yaabo in ay horseedday in ka badan hal milyan oo gaajo ah. Sannadkii 1991kii, guulihii degdega ahaa ee ay jabhaduhu gaareen ayaa ugu dambayntii horseeday in la afgambiyo dawladdii Mengistu oo ay ku qasbeen in uu musaafuris ku tago Harare.
Laakiin farqiga muhiimka ah ee u dhexeeya labada isku dhacyo ayaa ah in kooxda hadda socota ee dagaalyahannada ay leeyihiin yoolal ka duwan kuwii jiilkii hore, ayuu yidhi Mehari Taddel, borofisoor ku takhasusay maamulka ku-meel-gaarka ah iyo siyaasadda socdaalka ee Machadka Jaamacadda Yurub ee Florence.
“In badan oo ka mid ah goobjoogayaasha, 1991 waxaa jiray heshiis siyaasadeed oo weyn iyo rabitaan milatari oo ah in la dhiso dawlad ku-meel-gaar ah, taas oo aan hadda ahayn xaaladdu.”
Khamiistii, dalalka gobolka iyo quwadaha caalamiga ah waxay xoojiyeen dadaallada lagu dejinayo xaaladda iyadoo baaqyada xabbad joojinta degdega ah ay sii xoogeysanayeen.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa 16-kii Nofeember iclaamiyay shir ay isugu imaanayaan Midowga Afrikada Bari oo ay ku mideysan yihiin Urur Goboleedka IGAD, kaasi oo looga hadlayo colaadda sii xumaaneysa, halka Midowga Yurub uu ku celceliyay in “Xal Milatari uusan jirin” Mareykanka ayaa u diray Itoobiya ergeyga gaarka ah Jeffrey Feltman si wadahadalo loo bilaabo.
Laakin iyadoo dadaallada dhex dhexaadinta ilaa hadda ay ku guul darreysatay, isla markaana aysan labada dhinacba muujinin wax calaamad ah oo ay ku muujinayaan dib u dhac, waxaa la sugayaa in beesha caalamka ay diyaariso wada xaajood iyo heshiis, taasoo looga hortagayo weerar u muuqda inuu ku wajahan yahay Addis Ababa.
“Labada dhinac waxay ku heshiiyeen baahida loo qabo in la ilaaliyo dariiqa ku-meel-gaarka ah iyo baahida loo qabo in la dhameystiro qaab-dhismeedka dowladda ku-meel-gaarka ah iyo in la dedejiyo dhismaha dowladd cusub,” ayuu yiri xafiiska al-Burhan.
Hogaamiyaha militariga Suudaan ayaa Mareykanka kula heshiiyey baahida loo qabo in la dedejiyo dhismaha dowlad cusub kadib markii uu amray in la sii daayo afar wasiir oo ka tirsanaa xukuumadii uu afgambiga ku riday dabayaaqadii bishii hore, sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Suudan.
Xafiiska General Cabdifattaax al-Burhan ayaa bayaan uu soo saaray Khamiistii ka dib markii uu telefoonka kula hadlay xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in Blinken baaqa ku booriyay al-Burhan in uu si degdeg ah u sii daayo dhammaan dadka siyaasadda u xidhan tan iyo afgambiga oo uu “ku soo laabto wadahadal uu Ra’iisal Wasaare Hamdok ku soo celiyo xafiiska, soona celinaya dawladnimadii uu hoggaaminayay ee rayidka Suudaan”.
“Waxaan tixgelineynaa dhammaan hindisayaasha gudaha iyo dibadda si aan ugu adeegno danaha qaranka,” lataliyaha warbaahinta al-Burhan Taher Abouhaga ayaa sidaas yidhi Khamiista. “Dhismaha dowladda waa dhow yahay.”
Dhanka kale, Dibadbaxyo ballaaran oo Dimuqraadiyad-doon ah ayaa la filayaa Jimcaha maanta ah inuu ka dhaco caasimadda Suudaan ee Khartuum iyo magaalooyinka kale ee waaweyn.
Isagoo la hadlayay Aljazeera’s UpFront barnaamijka, Nureldin Satti, danjiraha Suudaan ee Mareykanka, ayaa sheegay in “inqilaabkii uu dhammaaday”. “Ma sii socon karto abaabulka aan aragnay oo aan arki doonno maalmaha iyo toddobaadyada soo socda.”
Fadhiga degdegga ee Qaramada Midoobay
Jeneraallada ugu sarreeya Suudaan iyo madax hore oo rayid ah ayaa waxaa u socday wada-xaajoodyo adag oo ku aaddan sidii looga bixi lahaa qalalaasaha ka dhashay la wareegidda militariga 25-kii Oktoobar, markii al-Burhaan uu kala diray dowladdii ku-meel-gaarka ahayd, isla markaana uu xiray mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadda afgambi.
Hamdok, oo la sii daayay laba maalmood gudahood markii la xiray, tan iyo markii lagu hayay xabsi guri, ayaa loo oggolaaday inuu la kulmo diblomaasiyiinta Qaramada Midoobay iyo kuwa caalamiga ah, taasoo qayb ka ah dadaallada dhexdhexaadinta.
Dhanka kale, sarkaalka ugu sarreeya Qaramada Midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa Jimcihii ku baaqay in hoggaamiyeyaasha millatariga Suudaan ay dib uga laabtaan hadallo ay ka jeediyeen kulan degdeg ah oo ku saabsan xaaladda dalka oo ka dhacay golaha xuquuqul insaanka ee Geneva.
Madaxa sare ee xuquuqul insaanka Michelle Bachelet ayaa ku tilmaantay la wareegida militariga mid “aad u dhib badan” waxayna ku baaqday in la joojiyo isticmaalka halista ah ee ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale booliska militariga iyo canaasiirta sirdoonka oo ay sheegtay in ilaa hadda ay dileen ugu yaraan 13 qof oo rayid ah. .
“Waxaan ku boorrinayaa hoggaamiyeyaasha millatariga Suudaan, iyo taageerayaashooda, inay dib u laabtaan si ay ugu oggolaadaan waddanku inuu ku soo laabto waddada horumarka ee ku aaddan dib-u-habaynta hay’adaha iyo sharciga,” ayay ka tiri golaha.
Qaramada Midoobay ayaa isku dayaysay in ay dhexdhexaadiso soo afjarida qalalaasaha siyaasadeed. Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Suudaan, Volker Perthes, ayaa sheegay in wada-hadallada ay ka soo baxeen qodobbada heshiiska suurtagalka ah ee dib loogu soo celinayo awood qaybsiga, oo ay ku jirto dib u soo celinta ra’iisul wasaaraha xilka laga tuuray.
Sii daynta Wasiirada
Wakaaladda wararka ee SUNA ayaa sheegtay Khamiistii in al-Burhaan uu soo saaray go’aanka Xamza Baloul, wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka, Hashim Hasabel-Rasoul, wasiirka isgaarsiinta, Ali Gedou, wasiirka ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga ah iyo Youssef Adam, wasiirka ganacsiga dhalinyarada iyo ciyaaraha in la iska daayo. Weriyaha Aljazeera Hiba Morgan ayaa Jimcihii sheegtay in afarta wasiir la sii daayay, waxayna intaas ku dartay in dhowr wasiir oo kale ay ku hareen xabsiga.
“Afarta wasiir waa uun qaar ka mid ah kuwii la xidhay subaxdii afgambiga. Waxa kale oo jiray hawl-wadeenno iyo qareenno la xidhay. Laakin siideynta ayaa ku soo beegantay iyadoo ay socdaan wadahadallo lagu soo dhisayo dowlad cusub iyo iyadoo Xamdok, oo weli xabsi guri ku jira uu ku adkeysanayo in la sii daayo maxaabiista,” ayay tiri weriye Hiba Morgan.
Hamdok ayaa sidoo kale dalbaday in afgambiga dib loo celiyo isagoo shuruud ku xiray wada xaajood dambe oo lala galo militariga.
Ciidamada Tigreega ayaa hadda sheeganaya inay gacanta ku hayaan magaalooyinka muhiimka ah ee Dessie iyo Kombolcha, inkastoo dowladda federaalka ee Itoobiya ay ku doodeyso sheegashadaas.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay laba jibaaraan dadaalkooda dagaalka sokeeye ee dalka ka socda, iyadoo xoogagga fallaagada ay sheegeen inay qabsadeen magaalooyin muhiim ah oo ay gacanta ku dhigeen taasoo ah waddo weyn oo caasimadda soo gasha.
Talaabada lagu qaaday magaalada caasimada ah ee Addis Ababa ayaa noqonaysa waji cusub oo uu galo dagaalka ay ku dhinteen kumanaanka qof tan iyo markii uu dagaalku ku dhawaad ​​sanad ka hor ku dhex maray ciidamada dawlada Itoobiya iyo kooxda TPLF ee ka dagaalanta gobolka waqooyi ee dalkaasi. Afhayeenka ra’iisul wasaaraha, Billene Seyoum, si degdeg ah ugama jawaabin su’aal Isniintii la weydiiyay oo ku saabsan halka uu hadda ku sugan yahay hoggaamiyaha dowladda ama qorshaha safarka.
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa war uu soo saaray Axadii ku sheegay in ciidamada federaalku ay afar jiho ka dagaalamayaan ciidamada Tigreega “waa inaan ogaanaa in cadawgeena awoodiisa uu yahay daciifnimadayada iyo diyaargarow la’aantayada”. Ciidamada Tigreega ayaa usbuucan dhamaadkiisa u sheegay wakaalada wararka ee AP in ay diyaar u yihiin in ay jidh ahaan isku xidhaan koox kale oo hubaysan oo lagu magacaabo Oromo Liberation Army (OLA) oo ay isbahaysi la galeen horaantii sanadkan.
Ciidamada Tigreega ayaa hadda sheeganaya inay gacanta ku hayaan magaalooyinka muhiimka ah ee Dessie iyo Kombolcha, inkastoo dowladda federaalka ay ku doodeyso sheegashadaas.
“Waxaan si adag gacanta ugu haynaa #Kombolcha,” afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka, isagoo tilmaamaya tallaabo wayn oo ay qaadeen fallaagada. Fallaagada ayaa tan iyo markii ay inta badan Tigreega kala wareegeen ciidamada federaalka bishii Juun, ayna isku fidiyeen gobollada deriska la ah. Laakin afhayeenka dowladda Legesse Tulu ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay ku sheegay “Dagaal xooggan ayaa hadda ka socda Dessie iyo Kombolcha.”
Getachew ayaa sheegay in kooxda TPLF oo siyaasadda qaranka gacanta ku haysay muddo soddon sano ah ilaa 2018-ka aysan lahayn “ujeedo kale oo aan ahayn in ay jabiso go’doominta halista ah” ee ay ku hayso Tigrayga oo ay ka jirto xaalad bini’aadantinimo oo aad u daran.
Magaalada Kombolcha ayay dadka deegaanka oo cabsan u sheegeen wakaalada wararka ee AFP in ay maalintii shalay ku sugnaayeen guryahooda kadib markii ay rasaasta ka dhacaysay dariiqyada, waxaana halkaas ku dagaalamay ciidamada TPLF iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya. Semira, oo 36-jir ah, kana mid ah dhowr qof oo baxay Axaddii, ayaa sheegtay inay aragtay fallaagada oo waddada marayey ka dib markii ay dhammaatay salaadda masaajid deegaanka ah. “Waxaan arkay qaar ka mid ah askarta… oo magaalada ka baxaya oo wata dhawr baabuur,” ayay u sheegtay AFP. Nin dukaanle ah oo magaciisa ku sheegay Xamdiu ayaa sheegay in uu sidoo kale indhihiisa ku arkayay ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sii baxayay gawaari xamuul ah. “Magaaladu hadda aad ayay u xasilloon tahay…dadka oo dhan waxay ku jiraan gudaha gudaha,” ayuu u sheegay AFP, isagoo intaas ku daray inuu daaqadda ka arki karo dagaalyahannada TPLF oo waddooyinka taagan.
Dagaalka ayaa laga yaabaa inuu gaaro gobolka Oromada oo daris la ah caasimadda dalkaas. Qowmiyadda Oromada ayaa mar ku ammaantay Abiy Axmed inuu yahay ra’iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Oromo ah, balse niyad-jab ayaa tan iyo markii ay soo ifbaxday xarigga hoggaamiyeyaasha qawmiyadaha ee aan hadalka lahayn. Sidoo kale Axadii, xukuumadda gobolka Axmaarada, oo uu dagaalku xooga saaray tan iyo markii ay ciidamada Tigreegu dib ula wareegeen inta badan gobolkooda bishii Juun, ayaa amar ku bixisay ku dhawaad ​​dhammaan hay’adaha dawladda inay joojiyaan hawlahooda caadiga ah oo ay ku biiraan dagaalka. Waxa kale oo ay mamnuucday inta badan dhaqdhaqaaqyada magaalooyinka iyo magaalooyinka wixii ka dambeeya 8-da fiidnimo
Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay ku cadaadinayaan dowladda Itoobiya in ay ka qaado go’doominta bilaha ah ee saaran gobolkooda oo gaaraya 6 milyan oo qof. Hoggaamiyayaasha Tigray-ga ayaa in muddo ah gacanta ku hayay dowladda qaranka ka hor inta uusan Axmed xilka la wareegin 2018-kii.
Dhinaca kale, Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, Antony Blinken, ayaa Isniintii sheegay inuu ka walaacsan yahay wararka sheegaya in Ciiddanka Tigreega ee kacdoonka wada ay la wareegeen laba magaalo oo muhiim u ah Itoobiya oo kala ah Dessie iyo Kombolcha.
“Dagaallada sii socdaa waxay sii dheereynayaan dhibaatada bini’aadantinimo ee ba’an ee ka jirta waqooyiga Itoobiya, dhammaan dhinacyadu waa inay joojiyaan hawlgallada milatari oo ay bilaabaan wadahadal xabbad-joojin shuruud la’aan,” ayuu yidhi.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay Isniintii in ciidamada fallaagada ee Tigrayga ay 100 dhallinyaro ah ku dileen Kombolcha.
“Kooxda argagixisada ah ee TPLF ayaa gabi ahaanba dil toogasho ah ku fulisay in ka badan 100 dhalinyaro ah oo ku nool Kombolcha deegaanadii ay gudaha u galeen, beesha caalamku waa in aanay indhaha ka daboolin falalkan waxashnimada ah” ayaa lagu yidhi barteeda Twitter-ka. Bayaanka laguma soo darin faahfaahinta.